Lua 5.4 dị ebe a na ndị a bụ mgbanwe ya na akụkọ | Site na Linux
Mgbe afọ ise nke mmepe, ụbọchị ole na ole gara aga a p⁇ ́ kú Kilisi p⁇ ́ kú aà gbɛ .́⁇ píi, nke bu asụsụ eji eme ihe ederede na edeputa ngwa ngwa nke eji ya dika asusu agbakwunyere.
Lua jikọtara usoro nhazi dị mfe yana ike dị ike nke nkọwa data site na ojiji nke njikọta akpakọrịta na asụsụ ọmụmụ asụsụ. Lua na-eji ike ederede; asụsụ rụọ na-ghọrọ bytecode na-agba ọsọ n'elu a log mebere igwe na akpaka mkpoko mkpoko.
1 Kedu ihe ọhụrụ na Lua 5.4?
2 Esi tinye Lua na Linux?
Kedu ihe ọhụrụ na Lua 5.4?
Na asụsụ ọhụrụ a nke asụsụ ahụ, anyị nwere ike ịhụ na ọ pụtara ìhè usoro ohuru nke ndi na-kpo ahihia, nke mejupụtara ọnọdụ nchịkọta mkpokọta mgbakwunye enwere na mbụ.
Wayzọ ọhụrụ na-egosi ịmalite ịmalite ngwa ngwa, nke na-ekpuchi naanị ihe ndị e kere eke n'oge na-adịbeghị anya. A na-arụ ọrụ zuru oke nke ihe niile naanị ma ọ bụrụ na, mgbe obere oge gachara, enweghị ike ị nweta ihe ngosi oriri ịchọrọ. Approachzọ a na-eme ka arụmọrụ dị elu na obere nchekwa nchekwa na ọnọdụ ịchekwa ọtụtụ ọnụọgụ nke na-adịru nwa obere oge.
Mgbanwe ọzọ nke pụtara na Lua 5.4 bụ ike iji kọwaa njigide ejiri agwa "const" kọwaa. Enwere ike ịnye ụdị mgbanwe ndị a otu ugboro ma mgbe ebidochara, ha enweghị ike ịgbanwe ọzọ.
Ọzọkwa nke ahụ a na-egosipụtakwa nkwado ọhụrụ maka ndị na-agbanwe agbanwe «Na-emechi», nke e kenyere iji «emechi» àgwà na yiri mgbe nile obodo mgbanwe (na njiri mara const), nke dị iche na ha n'ihi na emechiri ọnụ ahịa (akpọrọ "__close" usoro ọ bụla na mpaghara ọhụhụ.
Ofdị "Userdata", nke na-enye ike ịchekwa data C ọ bụla na Lua variables (na-anọchi anya ngọngọ nke data na ebe nchekwa ma ọ bụ nwee pointer C), nwere ike ugbu a nwere otutu ụkpụrụ (nwee ọtụtụ metatables).
N'aka nke ọzọ, a na-atụgharị asụsụ ọhụụ ọhụrụ na Lua 5.4 maka ịkọwapụta ọnụ ọgụgụ na »maka« loops. A na-agbakọ ọnụ ọgụgụ nke iterations tupu mmalite nke akaghị, nke na-ezere ijubiga ókè na ntụgharị. Ọ bụrụ na uru izizi karịrị uru oke, a na-emehie.
E tinyela usoro ịdọ aka na ntị, nke ejiri okwu ịdọ aka ná ntị kpebie ma, n'adịghị ka njehie, anaghị emetụta usoro mmemme mmemme.
Agbakwunyela ozi Debugging na arụmụka ọrụ yana ụkpụrụ nloghachi na onye ọrụ "laghachi".
Emeela ka ọrụ maka ịtụgharị ụdọ gaa na nọmba gaa n'ọbá akwụkwọ "eriri".
Oku ọrụ nkesa ebe nchekwa nwere ike ida ugbua ma oburu na ebelata ebe nchekwa ebelata.
Agbakwunyere nkwado maka ihe ngosipụta '% p' ​​ọhụrụ na ọrụ 'string.format'
Ọbá akwụkwọ utf8 na-enye nkwado maka koodu agwa na nọmba ruo 2 31 XNUMX.
Agbakwunyere arụmụka nhọrọ 'init' ọhụrụ na ọrụ 'string.gmatch', nke na-ekpebi ebe ọ ga-amalite nyocha (na ndabara, malite na agwa 1).
Agbakwunyere ọrụ ọhụrụ 'lua_resetthread' (weghachite eri ahụ, kpochapu oku niile ma mechie mgbanwe niile "imechi") na 'coroutine.close'
Esi tinye Lua na Linux?
N'ihi nnukwu asụsụ a na-ewu ewu onye ntughari okwu ya di na otutu nkesa Linux.
para ndị bụ ndị ọrụ Debian, Ubuntu, Linux Mint ma ọ bụ sistemụ ọ bụla sitere na ndị aNaanị anyị ga-emeghe ọnụ ma mebie iwu na ya:
Ọ bụrụ ha ndị ọrụ nke Arch Linux, Manjaro, Antergos ma ọ bụ nkesa ọ bụla sitere na Arch Linux, anyị nwere ike iwunye onye ntụgharị okwu site na nchekwa AUR, maka nke a ka anyị ga-eji pịnye:
Mgbe maka Ndị bụ ndị ọrụ CentOS, RHEL, Fedora ma ọ bụ nkesa ọ bụla sitere na ndị a, anyị nwere ike iwunye ya na:
Na njikere na ya, M ugbua arụnyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » Lua 5.4 dị ebe a na ndị a bụ mgbanwe ya na akụkọ
Mageia 8: Ihe Nlere Ule mbu (Alpha 1) Ugbu a